दुई वर्षमा दोब्बर होला त नेपाल आउने पर्यटक ? Bizshala -
दुई वर्षमा दोब्बर होला त नेपाल आउने पर्यटक ?
काठमाडौँ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा विदेशी पर्यटकको संख्यामा दोब्बर वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक पु¥याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
विगतका वर्षहरूमा चलाइएका विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियानबाट सन् २०१७ मा १० लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
सन् १९९८ देखिको १० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्य सन् २०१७ मा सार्थक भयो । सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भन्दै ‘भिजिट नेपाल १९९८’, ‘नेपाल टुरिजम इयर–२०११’, ‘भिजिन युरोप–२०१७’ तथा सन् २०१७ भरि घुमफिर वर्षको मनाइएको थियो ।
आजै मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठक बसी भ्रमण वर्षको लोगो तथा केही प्रचार सामग्री सार्वजनिक गरिएको छ । सो अभियानलाई सफल बनाउन उच्चस्तरीय विचार विमर्शसमेत गरिएको छ ।
पर्यटनमन्त्री अधिकारीले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न सबै निकाय सक्रिय ढंगले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“आज मूल आयोजक समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । अभियानलाई सफल तुल्याउन विभिन्न उपसमिति तय गरेका छौँ । भ्रमण वर्षलाई जसरी पनि सफल तुल्याउने छौँ, त्यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग र सक्रियता आवश्यक छ”, पर्यटनमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
पर्यटकले नेपाल आउँदा अविस्मरणीय अनुभूति ‘लाइफ टाइम भ्यालु एक्सपेरियन्स’ थिममा बनाइएको लोगोको पृष्ठभूमिमा हिमाल र अगाडिपट्टि एउटा संस्कृतिको संकेत राखिने छ, तलतिर ‘भिजिट नेपाल २०२० ः लाइफ टाइम एक्सपेरियन्स’ उल्लेख गरिनेछ ।
कार्यकारी प्रमुख जोशीले २० लाख पर्यटकको लक्ष्य भेटाउन पूर्वाधार बढाइ आक्रामक बजार प्रवद्र्धनका कामलाई अघि बढाइने छ भन्नुृभयो ।
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक ओपेन्द्र शर्मा, पर्यटन व्यवसायीहरु सिएन पाण्डे, सन्तवीर लामा, प्रमोद जैसवाललगायतले भ्रमण वर्ष अभियानलाई कसरी सफल तुल्याउन सकिन्छ भनेर राय सुझाव दिनुभएको थियो ।
सरकारले आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, प्रचारप्रसार र पर्यटक अनुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराई गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कालीञ्चोक मन्दिर अब केवलकारमा, दशैंदेखि व्यवसायिक संचालनमा
चरिकोट । दोलखाको कुरी बजारदेखि कालीञ्चोक मन्दिरसम्म निर्माण गरेको...